သူ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်နေပြီဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေကနေတစ်ဆင့်သိနိုင် 🙃 – Trend.com.mm
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်လို့ ချစ်သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ကိုယ်နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့အီစီကလီဘာညာအနေအထားတွေဖြစ်နေလို့ လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ရတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေအများကြီးပါ။တစ်ချို့ကတော့ သိပ်ချစ်လွန်းလို့ သိရက်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးအပြုံးမပျက် ချစ်သူလက်ကိုဆွဲထားတတ်ကြတယ်။တစ်ချို့ကတော့ သူကြင်မှကိုယ်ကြင် သူတောင်ပြတ်နိုင်သေးတာ ငါကဘာလို့မပြတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့မာနတွေနဲ့ အသည်းအေးတတ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူလို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြုံလာရတဲ့အခါရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းတွေလည်းမတူ ကွဲပြားသွားတတ်ကြပါတယ်။
အခု Trend ပျိုမေတို့အတွက် ကိုယ့်ချစ်သူမှာကိုယ့်အပြင်နောက်တစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေ ပြန်ပြီးမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာဖောက်နေပြီလို့ သိနိုင်တဲ့အချက်တွေဟာ…
အရင်လို တစ်ပတ် ၂ခါတွေ့နေကျကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး တစ်ခါလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်တော့တယ်။ကိုယ့်ဘက်က နည်းနည်းလေးသံသယ၀င်ပြီဆိုတာနဲ့ ပြန်ပြီးငြိမ်သွားပြန်ရော။ဖုန်းဆက်လိုက်ရင်လည်း လိုင်းမအားတာနဲ့တိုးလိုက်၊စက်ပိတ်ထားတယ်နဲ့တိုးလိုက်နဲ့ဖြစ်နေမယ်။သူ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုစသလိုနောက်သလိုနဲ့ သတိပေးစကားတွေပြောလာမယ်။ဒါမှမဟုတ် သူ့သူငယ်ချင်းတွေကပါ ကိုယ့်အပေါ်ဆက်ဆံပုံတွေပြောင်းလဲသွားမယ်။အေးစက်သွားမယ်။
နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံချိန်မှာ ဖုန်းဝင်လာရင် လန့်သွားမယ်။ပြီးရင် မယောင်မလည်နဲ့ ကိုယ်မရှိတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းသွားပြောမယ်။မဖြစ်မနေ ကိုယ့်ရှေ့မှာပြောရပြီဆိုရင်လည်း စကားတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့။ဟိုဘက်က ဂျီကျပြီ ရစ်နေပြီဆို ကိုယ်နဲ့တွေ့နေရင်းတောင် အရေးကြီးလို့ဆိုပြီး ပြန်သွားတတ်တယ်။တစ်ယောက်ဖုန်းတစ်ယောက်ဝင်မကြည့်ဖို့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ ပြောထားတယ်ဆိုသော်ငြားလည်း အရင်တုန်းက ကိုယ်သိထားတဲ့ပတ်စ်ဝေါ့က ပြောင်းလဲသွားမယ်။ကိုယ်တောင် မသိတဲ့ဖုန်းကဒ်တစ်ခု သူ ထည့်ထားနေပြီစသဖြင့်ပေါ့။
အရင်လိုကိုယ့်အပေါ်ခံစားချက်တွေမနွေးထွေးတော့ဘူး။အရင်တုန်းက ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ခဲ့တာတွေက အခုတော့ နောက်တစ်ယောက်ကိုဂရုစိုက်နေရလို့မေ့သွားပြီ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့နောက်တစ်ယောက်အကြိုက်ကို မှတ်ထားရလို့ ရောတောင်ရောနေတတ်တယ်။ကိုယ်က ရိပ်မိရင်တောင် သူ့ဘက်ကအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ဖြေရှင်းပြတတ်တယ်။ဖုန်းဆက်နေကျ အချိန်တွေမှာလည်းမဆက်တော့သလို နှစ်ယောက်သားလျှောက်လည်၊လျှောက်သွားကြဖို့ကိုလည်းသူ့ဘက်ကနေ စပြောတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။
ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပြောင်းလဲသွားရင် စိတ်ထဲကနေ အလိုလိုသိပါတယ်။စိတ်ထဲထင့်သွားတာမျိုး၊တစ်ခုခုခံစားနေရတာမျိုးဆို ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးမထားပါနဲ့။သူ ကိုယ့်အပေါ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မဟုတ်ရင်၊ကိုယ့်ပယောဂကြောင့်မဟုတ်ရင် ဒါသူ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်နေတာပါပဲ။
အရင်တုန်းက သိပ်လှတယ်ဆိုတဲ့ဆံနွယ်တွေဟာ အခုချိန်မှာတော့ မျက်စိရှုပ်စရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ်အကောင်းမမြင်တော့ဘူး။ဘာမဆို အပြစ်တင်ချင်နေတယ်။ကိုယ့်ဖြေရှင်းချက်တွေက သူ့အတွက်တော့ ဆင်ခြေတွေဖြစ်နေမယ်။အလကားနေရင်း ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်လက်ညှိုးထိုးနေတတ်တယ်။ဒါက သူလမ်းခွဲချင်နေပြီဆိုတဲ့ နိမိတ်ပြသင်္ကေတတစ်ခုပါပဲ။
ဒါကတော့ အသိသာဆုံးအချက်ပါပဲ။ဒါတောင် သူ့ညီမဖြစ်မယ်။သူ့အစ်မဖြစ်မယ်နဲ့ စိတ်ကိုဖော့ပြီးတွေးမိနေသေးလား။တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ရမှာ ကိုယ်ပါ။စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်မှာချစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုနဲ့ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူကို ဆွဲထားဖို့ကြိုးစားဦးမှာလား?အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို သူနဲ့လမ်းမခွဲနိုင်ဘူး။မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားမယ်ပဲဆိုရင်တောင် တစ်ချိန်ကျရင် သူ့ဘက်က လမ်းခွဲစကားကိုစပြောလာမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ရော?
ကိုယ်ကတော့ မိန်းကလေးထုဘက်က အကောင်းဆုံးအကြံပေးရရင် ချစ်တယ်ဆိုပြီး ဆွဲထားမယ့်အစား ကိုယ်စိတ်အပင်ပန်းခံ၊သံသယစိတ်တွေနဲ့အမြဲပူလောင်နေရမယ့်အစား လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။သူသာ ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ချစ်ခဲ့ပြီးမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသိသွားရင် ကိုယ့်ဆီပြန်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ယောက်က ကိုယ်သူ့အပေါ်ကောင်းသလိုမကောင်းတဲ့အခါ၊ကိုယ်အနစ်နာခံသလောက်မခံတဲ့အခါ၊ကိုယ်သူ့ကိုချစ်သလို နားလည်ပေးသလို နောက်တစ်ယောက်က နားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကိုသူပြန်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါ သူကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ထိ ကိုယ်လည်းသူ့ကိုလိုအပ်နေဆဲချစ်နေဆဲဆိုရင်တော့ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ သူထွက်သွားတဲ့အချိန်၊သူနောက်တစ်ယောက်နဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန် ကိုယ်ကလည်း အချစ်စစ်ဆိုတာကို ထပ်ပြီးရှာတွေ့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်အချစ်စစ်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှ သူပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် အရမ်းနောက်ကျသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပါပဲ၊အချိန်ဆိုတာ နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာ💗ဘာမဆို ပိုကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးလက်ကိုင်ထားပြီး ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ 💌
ကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူဟာ အစကတည်းက ကိုယ့်ကိုလိမ်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြလို့ ခဈြသူတှဖွေဈလာတယျဆိုပမေဲ့လညျး ကိုယျနဲ့ခဈြသူဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ တဈခွားတဈယောကျနဲ့အီစီကလီဘာညာအနအေထားတှဖွေဈနလေို့ လမျးခှဲပွတျစဲလိုကျရတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှအေမြားကွီးပါ။တဈခြို့ကတော့ သိပျခဈြလှနျးလို့ သိရကျနဲ့ဟနျဆောငျပွီးအပွုံးမပကျြ ခဈြသူလကျကိုဆှဲထားတတျကွတယျ။တဈခြို့ကတော့ သူကွငျမှကိုယျကွငျ သူတောငျပွတျနိုငျသေးတာ ငါကဘာလို့မပွတျရမှာလဲဆိုတဲ့မာနတှနေဲ့ အသညျးအေးတတျကွပါတယျ။ဒါကတော့ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူလို့ ဒီလိုအဖွဈအပကျြတှကွေုံလာရတဲ့အခါရငျဆိုငျဖွရှေငျးနညျးတှလေညျးမတူ ကှဲပွားသှားတတျကွပါတယျ။
အခု Trend ပြိုမတေို့အတှကျ ကိုယျ့ခဈြသူမှာကိုယျ့အပွငျနောကျတဈယောကျရှိနပွေီဆိုတာ သိနိုငျတဲ့အခကျြလေးတှေ ပွနျပွီးမြှဝသှေားမှာဖွဈပါတယျ။လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ကိုယျ့ခဈြသူ ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာဖောကျနပွေီလို့ သိနိုငျတဲ့အခကျြတှဟော…
အရငျလို တဈပတျ ၂ခါတှနေ့ကေကြနေ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွပွီး တဈခါလောကျပဲတှဖွေ့ဈတော့တယျ။ကိုယျ့ဘကျက နညျးနညျးလေးသံသယဝငျပွီဆိုတာနဲ့ ပွနျပွီးငွိမျသှားပွနျရော။ဖုနျးဆကျလိုကျရငျလညျး လိုငျးမအားတာနဲ့တိုးလိုကျ၊စကျပိတျထားတယျနဲ့တိုးလိုကျနဲ့ဖွဈနမေယျ။သူ့သူငယျခငျြးတှကေလညျး ကိုယျ့ကိုစသလိုနောကျသလိုနဲ့ သတိပေးစကားတှပွေောလာမယျ။ဒါမှမဟုတျ သူ့သူငယျခငျြးတှကေပါ ကိုယျ့အပျေါဆကျဆံပုံတှပွေောငျးလဲသှားမယျ။အေးစကျသှားမယျ။
နှဈယောကျသားတှဆေုံ့ခြိနျမှာ ဖုနျးဝငျလာရငျ လနျ့သှားမယျ။ပွီးရငျ မယောငျမလညျနဲ့ ကိုယျမရှိတဲ့နရောမှာ ဖုနျးသှားပွောမယျ။မဖွဈမနေ ကိုယျ့ရှမှေ့ာပွောရပွီဆိုရငျလညျး စကားတှကေ ဟိုရောကျဒီရောကျပေါ့။ဟိုဘကျက ဂြီကပြွီ ရဈနပွေီဆို ကိုယျနဲ့တှနေ့ရေငျးတောငျ အရေးကွီးလို့ဆိုပွီး ပွနျသှားတတျတယျ။တဈယောကျဖုနျးတဈယောကျဝငျမကွညျ့ဖို့ လှတျလပျခှငျ့ပေးဖို့ ပွောထားတယျဆိုသျောငွားလညျး အရငျတုနျးက ကိုယျသိထားတဲ့ပတျဈဝေါ့က ပွောငျးလဲသှားမယျ။ကိုယျတောငျ မသိတဲ့ဖုနျးကဒျတဈခု သူ ထညျ့ထားနပွေီစသဖွငျ့ပေါ့။
အရငျလိုကိုယျ့အပျေါခံစားခကျြတှမေနှေးထှေးတော့ဘူး။အရငျတုနျးက ကိုယျ့ကိုဂရုစိုကျခဲ့တာတှကေ အခုတော့ နောကျတဈယောကျကိုဂရုစိုကျနရေလို့မသှေ့ားပွီ။တဈခါတဈလေ ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့နောကျတဈယောကျအကွိုကျကို မှတျထားရလို့ ရောတောငျရောနတေတျတယျ။ကိုယျက ရိပျမိရငျတောငျ သူ့ဘကျကအကွောငျးပွခကျြမြိုးစုံနဲ့ဖွရှေငျးပွတတျတယျ။ဖုနျးဆကျနကြေ အခြိနျတှမှောလညျးမဆကျတော့သလို နှဈယောကျသားလြှောကျလညျ၊လြှောကျသှားကွဖို့ကိုလညျးသူ့ဘကျကနေ စပွောတာမြိုးမရှိတော့ဘူး။
ကိုယျခဈြတဲ့လူတဈယောကျပွောငျးလဲသှားရငျ စိတျထဲကနေ အလိုလိုသိပါတယျ။စိတျထဲထငျ့သှားတာမြိုး၊တဈခုခုခံစားနရေတာမြိုးဆို ဘာမှမဟုတျပါဘူးလဆေိုပွီးမထားပါနဲ့။သူ ကိုယျ့အပျေါပွောငျးလဲသှားတယျဆိုတာ ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့မဟုတျရငျ၊ကိုယျ့ပယောဂကွောငျ့မဟုတျရငျ ဒါသူ ကိုယျ့အပျေါသစ်စာဖောကျနတောပါပဲ။
အရငျတုနျးက သိပျလှတယျဆိုတဲ့ဆံနှယျတှဟော အခုခြိနျမှာတော့ မကျြစိရှုပျစရာဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ကိုယျဘာလုပျလုပျအကောငျးမမွငျတော့ဘူး။ဘာမဆို အပွဈတငျခငျြနတေယျ။ကိုယျ့ဖွရှေငျးခကျြတှကေ သူ့အတှကျတော့ ဆငျခွတှေဖွေဈနမေယျ။အလကားနရေငျး ကိုယျ့ကိုအပွဈတငျလကျညှိုးထိုးနတေတျတယျ။ဒါက သူလမျးခှဲခငျြနပွေီဆိုတဲ့ နိမိတျပွသင်ျကတေတဈခုပါပဲ။
ဒါကတော့ အသိသာဆုံးအခကျြပါပဲ။ဒါတောငျ သူ့ညီမဖွဈမယျ။သူ့အဈမဖွဈမယျနဲ့ စိတျကိုဖော့ပွီးတှေးမိနသေေးလား။တကယျတမျးရငျဆိုငျရမှာ ကိုယျပါ။စဉျးစားဆုံးဖွတျရမယျ့အခြိနျမှာခဈြတယျဆိုတဲ့အခကျြတဈခုနဲ့ ကိုယျ့အပျေါသစ်စာဖောကျသှားတဲ့သူကို ဆှဲထားဖို့ကွိုးစားဦးမှာလား?အပျေါမှာပွောခဲ့သလို သူနဲ့လမျးမခှဲနိုငျဘူး။မသိခငျြယောငျဆောငျထားမယျပဲဆိုရငျတောငျ တဈခြိနျကရြငျ သူ့ဘကျက လမျးခှဲစကားကိုစပွောလာမှာပါ။အဲ့ဒီအခြိနျကရြငျရော?
ကိုယျကတော့ မိနျးကလေးထုဘကျက အကောငျးဆုံးအကွံပေးရရငျ ခဈြတယျဆိုပွီး ဆှဲထားမယျ့အစား ကိုယျစိတျအပငျပနျးခံ၊သံသယစိတျတှနေဲ့အမွဲပူလောငျနရေမယျ့အစား လှတျပေးလိုကျပါ။သူသာ ကိုယျ့အပျေါတကယျခဈြခဲ့ပွီးမခှဲနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောသိသှားရငျ ကိုယျ့ဆီပွနျလာပါလိမျ့မယျ။နောကျတဈယောကျက ကိုယျသူ့အပျေါကောငျးသလိုမကောငျးတဲ့အခါ၊ကိုယျအနဈနာခံသလောကျမခံတဲ့အခါ၊ကိုယျသူ့ကိုခဈြသလို နားလညျပေးသလို နောကျတဈယောကျက နားလညျမှုမပေးနိုငျဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့ ကောငျးကှကျတှကေိုသူပွနျမွငျလာပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီအခါ သူကိုယျ့ကိုပွနျပွီးလိုအပျလာပါလိမျ့မယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျထိ ကိုယျလညျးသူ့ကိုလိုအပျနဆေဲခဈြနဆေဲဆိုရငျတော့ပွနျလညျဆုံစညျးမညျပေါ့။အဲ့လိုမဟုတျပဲ သူထှကျသှားတဲ့အခြိနျ၊သူနောကျတဈယောကျနဲ့ပြျောနတေဲ့အခြိနျ ကိုယျကလညျး အခဈြစဈဆိုတာကို ထပျပွီးရှာတှသှေ့ားတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ကိုယျအခဈြစဈနဲ့ပြျောရှငျနတေဲ့အခြိနျမှ သူပွနျရောကျလာမယျဆိုရငျ အရမျးနောကျကသြှားပွီလို့ပဲပွောရမှာပါပဲ၊အခြိနျဆိုတာ နောကျပွနျဆုတျလို့ရတဲ့အရာမှမဟုတျတာ💗ဘာမဆို ပိုကောငျးဖို့ဖွဈလာတယျဆိုတဲ့အတှေးလေးလကျကိုငျထားပွီး ခေါငျးအေးအေးနဲ့စဉျးစားဆုံးဖွတျနိုငျကွပါစေ 💌